Phyu Phyu Thin Sympathizer: 11/01/2010 - 12/01/2010
0 comments at 8:23 PM Labels: Interview
0 comments at 4:43 PM Labels: General news
နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၀
၂၂. ၁၁. ၂၀၁၀ ခုနှစ် (တနင်္လာနေ့) နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာဟောင်း ဦးကျော်သူ နှင့် ဇနီးဒေါ်ရွှေဇီးကွက်၊ စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင်၊ အဆိုတော် အနဂ္ဂ၊ သံသာဝင်း၊ ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်) နှင့် ဇနီး၊ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး စသည့် စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတအနုအညာမောင်နှမများသည် တောင်ဒဂုံရှိ မဖြူဖြူသင်း ထူထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသော HIV ရောဂါဝေဒနာရှင်များ နားခိုရာဂေဟာသို့ သွားရောက်ပြီး ဒံပေါက်ထမင်း၊ ရေခဲမုန့်၊ အဝတ်အစားများနှင့် ငွေများကို လူသားချင်း ကူညီထောက်ထားသော စိတ်ဓာတ်တို့ဖြင့် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
အဆိုတော်အနဂ္ဂသည် သူ၏အဝတ်အစားများ၊ အနွေးထည်များ၊ ဟန်ထူးလွင်နှင့် မင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့မှ ငွေသားများ၊ ဦးကျော်သူမှ T-Shirt များ၊ ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော်ကြီး၏ ပုံတော်၊ ဆရာတော်ကြီး၏ ကပ်ကျော်ကျင့်စဉ် စာရွက်များ၊ ပန်းပေါင်းစုံ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တဆူတို့ကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီးသည့်နောက် ခုနစ်ရက်သားသမီးများ စုပေါင်းလှူဒါန်းထားသော ဒံပေါက်ထမင်း၊ ရေခဲမုန့်တို့ဖြင့် ကျွေးမွေးပြီး အားပေးစကားများ ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
လူသားအချင်းချင်း စာနာကူညီဖေးမသောစိတ်ဓာတ်နှင့် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားကျင့်ကြံခဲ့သော ဗြဟ္မစိုရ်တရား ၄ ပါးကို လက်ကိုင်ပြုခဲ့သော အနုပညာမောင်နှမများနည်းတူ မြန်မာပြည်သူလူထု တရပ်လုံးကပါ အကြင်နာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာပွားများမှုများကို ပေးကြမည်ဆိုပါက ကမ္ဘာမြေကြီးတခုလုံး သာယာစိုပြေမှုများနှင့် လူသားအားလုံး အေးချမ်းသာယာစိုပြေတော့မည် ဖြစ်သည်။
လူနာများကို အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ကြသလို လူနာများ၏ ပြန်လည်ပြောကြားသော ရင်တွင်းစကားများ၊ ခံစားချက်များ၊ ခံယူချက်စိတ်ဓာတ်များတို့သည် အားပေးခဲ့သူ အားပေးစကားပြောကြားခဲ့သူ ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့အတွက် အင်အားသစ်များများစွာ ဖြစ်ခဲ့ရပေတော့သည်။
HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များအား ဆက်လက်ကူညီရေး ပြည်တွင်းပြည်ပ စေတနာရှင်များ ညှိနှိုင်း
0 comments at 4:35 PM Labels: General news
By ကိုဇော်ဝင်းလှိုင် တနင်္လာ, 22 နိုဝင်ဘာ
NLD ဦးဆောင်မှုနဲ့ တောင်ဒဂုံမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ လူမှုရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာက HIV / AIDS ဝေဒနာ သည်တွေအနေနဲ့ အတည်တကျ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ဖို့ နေရာတနေရာ စီစဉ်ပေးရေးအတွက် NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်း၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနိုင်သူ စေတနာရှင်တွေနဲ့ အကူအညီပေးလိုကြတဲ့ တသီးပုဂ္ဂလ အမတ်လောင်းတွေ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဝေဒနာသည်တွေ နေထိုင်ရေး ကိစ္စတင်သာ မကဘဲ ဆေးဝါး ကုသမှုရရှိနိုင်အောင် ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့တုန်းက တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် NGO လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိကြတဲ့ တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေ ဦးဆောင်ပြီး လှုဒါန်းနိုင်တဲ့ စေတနာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးပါမယ်။
ဒီ ဝေဒနာသည်တွေအနေနဲ့ သူတို့နေထိုင်နေတဲ့ တောင်ဒဂုံက HIV / AIDS အခမဲ့စောင့်ရှောက်ရေးဌာနမှာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ဆက်ပြီးတော့ နေခွင့်မရတော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့ အတွက် အခုလို ဆွေးနွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ ငွေကြေးအားဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ သံရုံးတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ လတ်တလော ဒီဆေးခန်း ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်မှုပေးနေတဲ့ NLD အဖွဲ့က ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်၊ နေ့စဉ်လူနာတွေ လိုအပ်ချက်ကို လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ သူတွေထဲက ကိုရာဇာနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေ ကိုယ်စား NGO လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ မှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဒေါက်တာဖုန်းဝင်းနဲ့ ဒေါက်တာယူဇာမော်တို့အပြင် တခြားတသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် တချို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လတ်တလော လူနာတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ အပါအ၀င် NLD ကလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ ထိရောက်မှုရှိတဲ့အကြောင်း၊ စစ်အစိုးရနဲ့ အဆက်အဆံရှိတဲ့ သံတမန်တွေအနေနဲ့ စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်း ပြောဆိုပေးဖို့ တက်ရောက်လာသူတွေ အားလုံးက သံတမန်တွေကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့ NLD ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
“အဓိကအချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဟာတွေကို လုပ်နေတာတော့ အစိုးရကတော့ တဘက်ကနေပြီးတော့ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုဖို့ပဲ။ ညအိပ်တာကို။ ကျနော်တို့က Transit စခန်းလို ဖြစ်နေတာကိုး။ နားနေစခန်းလို ဖြစ်နေတာကို။ ဒီစင်တာမှာ အိပ်ကြ၊ နေကြ စားကြတယ်၊ ကျနော်တို့က ကျွေးတာမွေးတာလုပ်ရတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဆေးကုသမှုအတွက် စီစဉ်ပေးရတယ်။ လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေ ၀ယ်ပေးရတယ်။ ဆေးရုံသွားဖို့ အတွက် လမ်းစရိတ်ထုတ်ပေးရတယ်။ အဲလိုလုပ်နေတဲ့ဟာကို အခုကျတော့ လုံးဝကို တည်းခိုခွင့်တွေ မပေး တော့ဘူး၊ ပိတ်လိုက်ပီဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒါက တခုပေါ့။
နောက်တခုက ဘာလဲဆိုတော့ ဆေးရုံကို ပို့ရမယ်ဆိုတော့ ဆေးရုံက လက်ခံနိုင်တဲ့လူနာက ၄၀ အောက်မှာ ရှိမယ်၊ ကျနော်တို့က ၈၀ အထက်မှာရှိတဲ့ အခါကျတော့ လူနာ ၄၀ ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေ ပေါ်လာတယ်။ ဒါတွေကို ဆွေးနွေးတာပါပဲ။ အဲဒါတွေကို သံရုံးတွေက ပုဂ္ဂိုလ်များကပေါ့ဗျာ၊ သံအမတ်များ ကနေပြီးတော့ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ အစိုးရတွေကို ဆက်လက်တင်ပြဖို့နဲ့ နောက်တခုက သူတို့နိုင်ငံတွေက Donor တွေပေါ့။ အလှူရှင်တွေကို ရှင်းလင်းပြောပြဖို့။ ဒါ တခုပေါ့။
နောက်တခုက ဖြစ်နိုင်ရင်လည်း ဒီအစိုးရနဲ့ သူတို့မှာ အဆက်အဆံရှိရင် ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီ HIV လူနာတွေ ကိစ္စဟာ NLD လုပ်နေတဲ့ကိစ္စဟာ၊ ဖြူဖြူသင်းတို့ လုပ်နေတဲ့ကိစ္စဟာ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နေတယ်၊ အဲဒါကို အဆက်ပြတ်မသွားစေချင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို တိုက်တွန်းပြောဖို့ တင်ပြကြတယ်ပေါ့”
NLD အနေနဲ့ကတော့ နောင်မှာ အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ လှူချင်ရင် ဆေးခန်းရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲနေတဲ့ မဖြူဖြူသင်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ကူညီလို့ရတယ်ဆိုတာကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ဦးဝင်းတင်က ဆက်ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ NLD ဘက်က တင်ပြခဲ့တာကတော့ နောင်ကို အလှူရှင်များအနေနဲ့ ကူညီကြမယ်၊ ဒီကိစ္စကို ပါဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင် ဖြူဖြူသင်းတို့ ဌာနနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ဖို့။ ဆိုလိုတာ ကတော့ ဘယ်သူကမှ တဆင့်ခံ လုပ်မနေတော့ဘဲနဲ့ အကူညီတွေ ပေးချင်တယ်၊ ဆေးဝါးအကူအညီတွေ ပေးချင်တယ်၊ ပစ္စည်းအကူအညီပေးချင်တယ်၊ ငွေကြေးအကူအညီပေးချင်တယ်ဆိုရင် ဖြူဖြူသင်းတို့ရဲ့ ဌာနကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ကူညီပေးသွားဖို့ ကျနော်တို့က တိုက်တွန်းကြတယ်၊ ဒါလောက်ပါပဲဗျ”
တက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ သံတမန်တွေကလည်း လူနာတွေကို ဆေးကုသမှု ပေးရုံတင်မကဘူး။ သူတို့ နေထိုင်ရေးအတွက်ပါ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကို သူတို့ဘက်က သတိထားမိနေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို ကူညီမယ်လို့ ပြောဆိုသွားတဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ ဖုန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
“သူတို့လည်း အဲဒါကို သတိထားမိနေတာ ကြာပြီတဲ့။ သူတို့က အခု သရီးဒီ ဖဲန်း (Three D Fund) တို့ ဘာတို့ လုပ်တုံးက သူတို့က ကုသရေးတို့ ဆေးရရှိရေးတို့ အဲဒါကို အဓိက လုပ်ပေးခဲ့တာလေ။ အခုကျ တော့ ဆေးကုသတာ တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ နယ်ကနေလာပြီး ဆေးကုတဲ့လူတွေက ခဏတဖြုတ်နေဖို့ နေရာ လိုနေတာကိုး။ အဲဒါကတော့ လက်ရှိအခြေအနေအထိ ကျနော်တို့ မလုပ်ပေးနိုင်သေးတဲ့ ကိစ္စဖြစ် နေတာပေါ့လေ။
အဲဒါကို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေက ကြားထဲကနေ ဘယ်လို ၀ိုင်းလုပ်ပေးကြမလဲပေါ့နော်။ ဒါ ကျန်းမာရေး လေ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စကို လုပ်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့က ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရတာပေါ့။ ဆိုတော့ ဒီ ယာယီ နေထိုင်ဖို့ ကိစ္စအတွက်က တကယ်ကို လိုအပ်နေတဲ့ issue ဆိုတာလည်း သူတို့ သတိထားမိတယ်။ လုပ်လည်း လုပ်ဖို့ သင့်တယ်ဆိုတာ သူတို့သိတယ်။ ဆိုတော့ လက်ရှိ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း သူတို့ ကူမယ်။ တနိုင်ငံလုံး အနေနဲ့လည်း လုပ်နိုင်အောင် သူတို့ ကြိုးစားမယ်လို့ ပြောတယ်”
သူ့အနေနဲ့ကတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပက ၀ိုင်းဝန်းကူညီချင်သူတွေ များများပေါ်လာအောင် ဆောင်ရွက်သွား မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာ ဖုန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်လာတဲ့ သံတမန်တွေ ထဲမှာတော့ ဖိလစ်ပိုင် သံအမတ်ကြီး၊ သြစတျေးလျသံရုံးက သံအမတ်ကြီး၊ ဗြိတိသျှသံရုံးက သံမှူးနဲ့ အမေရိကန်သံရုံးက ကိုယ်စားလှယ်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
0 comments at 4:34 PM Labels: General news
ပြောင်းရွှေ့လျှင် အခက်အခဲရှိဟု HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များပြော
0 comments at 4:33 PM Labels: General news
စိုင်းဇွမ်ဆိုင်း Monday, 22 Nov ဧရာဝတီ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် စောင့်ရှောက် ထားသည့် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များက အာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့ကို အဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခိုင်းလျှင်လည်း ပြောင်းမည် မဟုတ် ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
အာဏာပိုင်များက အဓမ္မပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေသော်လည်း မဖြူဖြူသင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှိပါက ပြောင်းရွှေ့ရမည် ဟု မထင်ကြောင်း ဝေဒနာရှင် တဦးဖြစ်သူ မဝင်းဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
“အစတုန်းက အစ်မ(မဖြူဖြူသင်း) တယောက်ပဲ ကျမတို့အတွက်ရှိတယ်၊ ကျမတို့ဆီကို အမေစု လာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဆိုရင် အမေစုပါ ကျမတို့အတွက် ရှိနေပြီလို့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတယ်။ အစ်မ နဲ့ အမေစုတို့ ရှိနေသရွေ့တော့ ကျမတို့ ပြောင်းရွှေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ ထင်မိတယ်။ ပြောင်းခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ကျမတို့ ပြောင်းပေးမှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
အခြားဝေဒနာရှင်တဦးဖြစ်သူ ကိုစူပါ ကလည်း သက်ဆိုင်ရာမှ ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းထားသည့် သာကေတ ဆေးရုံသို့ ရောက်ဖူး ကြောင်း၊ ယင်း ဆေးရုံသို့ ဝေဒနာရှင်များ ပြောင်းရွှေ့ရပါက အခက်အခဲများ ကြုံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အဲဒီမှာ လူနာက ၆ ယောက်ပဲရှိတယ်၊ သောက်ရေတောင်မှ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ လူနာ တယောက်ကို တရက် ဆန် နို့ဆီဘူး နှစ်ဘူးနဲ့ အသား တဆယ်သား ပေးတယ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သွန်၊ သောက်ရေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဝယ်ရတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့တွေ ပြောင်းရွှေ့ရရင်လည်း အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး”ဟု ကိုစူပါက ဆိုသည်။
NLD ဗဟိုကော်မတီဝင် မဖြူဖြူသင်း ဦးစီးပြီး စောင့်ရှောက်ထားသည့် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များကို ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်တွေ့ဆုံ အားပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အာဏာပိုင်များက ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရှိ သည့် ဧည့်စာရင်းထုတ်ပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
“အမေစု လာလို့ ကျမတို့ကို ရွှေ့ခိုင်းတယ်လို့ မထင်ဘူး၊ အစတည်းက ဒီအသိုက်အမြုံကို ရွှေ့ပစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ လူကြီးတွေမှာ ရှိတယ်၊ အမေစုလာတာကို အကြောင်းပြပြီး ရွှေ့ခိုင်းတယ်လို့ ကျမ ထင်ပါတယ်”ဟု မဝင်းဝင်းနိုင် က ပြောသည်။
ဝေဒနာရှင်များကို ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းသည့် ကိစ္စသည် မလုပ်သင့်၊ မလုပ်ထိုက်သည့် ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ဂေဟာတည်ရှိရာ ရပ် ကွက် လူထုကလည်း ဝေဒနာရှင်များ ပြောင်းရွှေ့ပြီး အခက်အခဲ ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးကျော်သူက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဆိုတော်များဖြစ်သည့် အနဂ္ဂ၊ ကျားပေါက်၊ သံသာဝင်း၊ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး နှင့် စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင်တို့က တောင်ဒဂုံဂေဟာရှိ ဝေဒနာရှင်များအတွက် ဒံပေါက်၊ ရေခဲမုန့်၊ နာရေးကူညီမှု တံဆိပ်ပါ တီရှပ်များ၊ အဝတ်အထည်များ၊ ငွေ နှင့် ဘုရား ဆင်းတုတော်တဆူကို သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့သည် ဟုလည်း သိရှိရသည်။
“ဝေဒနာရှင်တွေကိုယ်တိုင်က သူတို့ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဖိအားပေးခံနေရတယ်ဆိုတာ ပြောပါတယ်၊ ဒီထက် ပိုကောင်းတဲ့ နေရာ ရှိရင်တောင်မှ သူတို့တွေ မသွားဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့အဖွဲ့ကို ပြောပါတယ်၊ တကယ်လို့ သူတို့တွေ ပြောင်းရွှေ့ရပြီး လိုအပ်တဲ့အကူအညီကို အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါလိုက်ပြီး ကူညီသွားဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်”ဟု အနဂ္ဂက ပြောသည်။
“လူနာတွေ အားလုံးက သူတို့ မသေခင်စပ်ကြားမှာ သူတို့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ နေသွားချင်တယ်၊ ဆိုတော့ ဒီပြောင်းရွှေ့ တဲ့ ကိစ္စကို လူသား တယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ လူစိတ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ကောင်းတယ်”ဟု ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
အဆိုတော် အနဂ္ဂ က လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ယခင်တည်းက ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း အပြီးတွင်လည်း လူမှုရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များ အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခံရပြီး အရေးပေါ် အကူ အညီလိုအပ်လျှင် ပေးရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
မဝင်းဝင်းနိုင်က“မပြောင်းချင်ဘူးဆိုတာက ကျမတို့လူနာတွေအတွက် ဒီမှာ အရမ်း အဆင်ပြေတယ်။ ပို စိတ်ချမ်းသာတယ်။ လူနာတွေကလည်း တယောက်နဲ့ တယောက်အရမ်း စည်းလုံးမှုရှိတယ်။ အစ်မ တို့နဲ့ နေရတာ တအား နွေးထွေးတယ်”ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝန်ကြီးများက ဝေဒနာရှင်များ လက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသော နေရာတွင် လူနာ အရေအတွက် များလွန်းသဖြင့် တီဘီကဲ့သို့ ကူးစက်ရောဂါများ ပြန့်ပွားရန်လွယ်ကူကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လက်ရှိ ဝေဒနာရှင် တချို့ကို သာကေတဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် ဂေဟာတာဝန်ရှိသူများကို ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့က ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ကျမတို့က HIV/AIDS တောင်ဖြစ်နေပြီပဲ၊ ဒီ တီဘီ လောက်တော့ မမှုတော့ဘူး၊ ဒီမှာရှိတဲ့ တီဘီ ဝေဒနာရှင်တွေလည်း စည်းကမ်းရှိတယ်၊ သူတို့သောက်ရမယ့်ဆေးကို ပုံမှန်သောက်နေကြလို့ သူတို့နဲ့ နေရဲတယ်”ဟုလည်း မဝင်းဝင်းနိုင်က ဆို သည်။
ကိုစူပါကလည်း တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ဂေဟာတွင် နေမကောင်းသူ ဝေဒနာရှင်များ၊ ART ဆေးသောက်နေရသူများ၊ ဆေးရုံမှ ဆင်းလာပြီး စိတ်ချရသည့် အခြေအနေမရှိသေးသူများ ရှိနေသောကြောင့် ဝေဒနာရှင်များကို ၎င်းတို့ နေထိုင်ရာဒေသများ သို့ ပြန်လွှတ်မည် ဆိုလျှင် များစွာအခက်အခဲ ဖြစ်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များ ကူညီစောင့်ရှောက်သည့် လုပ်ငန်းကို NLD လူမှုအထောက်အကူပြု အဖွဲ့က ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်း ဂေဟာ ၃ ခုကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျောက်ပန်းတောင်း၊ အောင်လံ၊ တောင်တွင်းကြီး၊ စသည့် မြို့နယ်များမှ ဝေဒနာရှင်များ အများဆုံး ဖြစ်ကြကြောင်း၊ တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်ရှိ ဂေဟာတွင် နေထိုင်သူ ၈၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဝေဒနာရှင်များအား ပြောင်းရွှေ့ပြီး ဂေဟာဖျက်မည်ဆိုသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကူညီရန် ဗြီတိသျှ သံအရာရှိ၊ ဖိလစ်ပိုင် သံအမတ်၊ သြစတြေးလျ ဒု သံအမတ် တို့နှင့် ယနေ့တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု NLD ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင် က ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ဂေဟာမှ ဝေဒနာရှင်များကို လက်ရှိနေရာတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကျော်ပြီး နေထိုင်ပါက ဖမ်ဆီး မည်ဟု အာဏာပိုင်များ က ယခုလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့သည်။
By ဦးမိုးဇော် တနင်္လာ, 22 နိုဝင်ဘာ
HIV ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားတာကို လက်မခံ
0 comments at 4:29 PM Labels: General news
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင် မဖြူဖြူသင်းရဲ့ နေအိမ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် မနေ့ညက ဧည့်စာရင်း သွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့တာကို အာဏာပိုင်တွေက လက်မခံခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒီဂေဟာကို တာဝန်ယူနေသူတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရာဇာက- ရပ်ကွက်တာဝန်ရှိသူတဦး သူတို့ထံ ဒီကနေ့ လာရောက်ပြီး လောလောဆယ် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားမှုကို လက်မခံနိုင်သေးဘူးလို့ အသိပေးခဲ့ကြောင်း အာအက်ဖ်အေက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ပြောဆိုပါတယ်။
“ညက သွားတိုင်တော့ ရဝတရုံးက ၉ နာရီလောက်ကြီး ပိတ်ထားတယ်။ ပိတ်ထားတော့ ဒီစာရွက်တွေကို ရယက က ကျနော်တို့ဆီကို ဧည့်စာရင်း အမြဲတမ်း လာယူနေတဲ့ ကိုခင်မောင်ဌေးဆိုတဲ့ ရာအိမ်မှူးအိမ်ကို ဝင်ပေးတယ်။ သူက ဒီမနက် ၁၁ နာရီထိုးတော့ အဲဒီစာရွက်တွေကို ပြန်ယူလာပြီးတော့ ဒီကိစ္စတွေကို ၂၅ ရက်နေ့ နောက်မှ လုပ်ပါတဲ့။ ၂၅ ရက်နေ့မှာ လူကြီးက ပြောင်းဆိုရင် ပြောင်းပါတဲ့၊ မပြောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဧည့်စာရင်း ဆက်ပေးပါ့မယ် ဆိုပြီး လာ အကြောင်းပြန်သွားတယ်”
မနေ့က ရန်ကုန်တိုင်း ကျန်းမာရေးဌာန တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဂေဟာကို လာရောက်ပြီး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဂေဟာမှာ လူနာတွေ အရမ်းများနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ဆေးရုံကို ပို့နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ ကိုရာဇာက ဂေဟာမှာ လူနာတွေ ဆက်လက် နေထိုင်ခွင့်ရပြီး ၂၅ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် ဧည့်စာရင်း ထပ်မံတိုင်ကြားခွင့် ရရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်က HIV/AIDS ဝေဒနာသည် ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာကို အာဏာပိုင်တွေက ပိတ်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲမှာပဲ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ကျန်းမာရေးဌာန တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဂေဟာ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူး ဒေါက်တာဦးလှမြင့် ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့က လူနာ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ တာဝန်ခံ ကိုရာဇာနဲ့ အဖွဲ့ကို ခေါ်ယူပြီး တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ဆေးရုံတခုမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ ဒီ ဆွေးနွေးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဒနာသည် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး တာဝန်ခံ NLD ဗဟိုကော်မတီဝင် မဖြူဖြူသင်းက RFA ကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့မနက်က တိုင်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့က လာကြည့်သွားတာ ရှိတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးတွေ လာပြီးတော့ လူနာတွေ တည်းဖို့ ခိုဖို့ အခြေအနေ၊ လူနာတွေ အရမ်းများနေတယ် ဆိုရင် သူတို့ဆီကိုလည်း ပို့လို့ရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း။ ဘာမှ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ဘက်က အေးအေးချမ်းချမ်းပါပဲ။ နောက်တခုက သူတို့ သာကေတမှာ ထားတဲ့ လူနာတည်းခိုဆောင်ကိုလည်း လာကြည့်ပါ ပေါ့။ သူတို့ အယောက် ၅၀ လောက် လက်ခံထားလို့ ရတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ဆီမှာ ပြဿနာတခုက မဝတ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုလှိုင် ဆိုတဲ့ တယောက်က ၂၅ ရက်နေ့မှာ လူနာတွေ အားလုံး ဒီအိမ်က ထွက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ပြောထားတာ ရှိတဲ့အခါကျတော့ ဒီညဆိုရင် ဧည့်စာရင်းက ပြည့်သွားပြီ။ ဒီည ပုံမှန် လုပ်နေကျအတိုင်း ဧည့်စာရင်းကတော့ သွားတိုင်မယ်၊ အဲဒီကျရင်တော့ အခြေအနေ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ဆိုတာ မသိဘူး။ ဒါ အာဏာပိုင် အခြေအနေပေါ့။ ဟိုဘက်က ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဘာတွေ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်”
ကျန်းမာရေးဌာန တာဝန်ခံတွေက အခုလို ပြေလည်ရာ ပြေလည်ကြောင်း လာရောက် ဆွေးနွေးကြပေမယ့် လူနာတွေ ၂၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ပြန်ရမယ်ဆိုပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေဘက်က နှင်ထုတ်ထားတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ဘာမှ မသိရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးဌာန တာဝန်ခံတွေက အခုလို ပြောဆို ဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာ ကျေနပ်မှု ရှိတယ်လို့မဖြူဖြူသင်းက ပြောပါတယ်။
“အခုလိုမျိုး ဆွေးနွေးလိုက်ရင် ပြဿနာ တော်တော်များများ ပြေလည်သွားမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်တယ်။ အဲလိုမျိုး မဆွေးနွေးဘဲနဲ့ သူတို့ ပြောချင်တာ ပြောမယ်၊ သူတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်မယ်၊ အမိန့်တွေ ပေးနေမယ် ဆိုရင်တော့ ကျမတို့ အနေနဲ့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလို ဆွေးနွေးတာမျိုးကို ကျမတို့ အနေနဲ့ ကြိုဆိုတယ်”
လောလောဆယ် မဖြူဖြူသင်း၊ ကိုရာဇာတို့ ကူညီ စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ လူနာ အယောက် (၈၀) ဝန်းကျင် ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
NLD စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာရှိ HIV လူနာများ နေရာရွှေ့ရန် ဆွေးနွေး
0 comments at 4:28 PM Labels: General news
By သားညွှန့်ဦး စနေ, 20 နိုဝင်ဘာ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် မဖြူဖြူသင်း ဦးစီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် အတွင်းက HIV လူနာသည်များ စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာမှာ လူနာတွေ ထားခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ အာဏာပိုင်တွေက ဖိအားပေး ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက် ဒီကနေ့မှာတော့ အဲဒီ တည်းခိုဆောင်မှာ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်နေသူ အချို့ကို အစိုးရကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ လူနာတွေကို အစိုးရက စီစဉ်ထားတဲ့ စောင့်ရှောက်ရေး ဌာနတခုကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ပြောဆိုဆွေးနွေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြောင်းစုံကိုတော့ ကိုသားညွန့်ဦးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကို ဆေးရုံကိုလာဖို့ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို ကားနဲ့လာခေါ်သွားတယ်။”
“တောင်ဒဂုံက ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံကိုသွားပြီးတော့ ကျနော်က မယက ဥက္ကဋ္ဌပဲလား၊ ကျန်းမာရေးဌာနကလူတွေနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့က အရင် ၂ ခါလာဖူးတယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ ကျနော်က တွဲတွေ့ရမယ်ထင်လို့ပေါ့ဗျာ။ သွားလိုက်တော့ အဲဒီမှာ မယက ဥက္ကဋ္ဌမရှိဘဲနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပေါ့ဗျာ။ အကြီးဆုံး တိုင်းကျန်းမာရေးမှူး ဆရာကြီး ဦးလှမြင့် တယောက် တွေ့တယ်ဗျာ။ နောက် NLD က ဒေါက်တာမျိုးသန့်၊ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံအုပ် ဦးခင်အောင်စော၊ တိုင်းရင်းဒုဦးစီးမှူး ဒေါ်စန္ဒာဝင်း၊ နောက်ပြီးတော့ တီဘီ တိုက်ဖျက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ မြမြ၀င်းနဲ့ ဒေါက်တာ ဒေါ်တင်မိမိခိုင် တို့ ၆ ယောက် တွေ့တယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ ဘက်ကတော့ ကျနော်ရယ်။ မဖြူညီမ မမာလာထွန်းရယ်၊ မဥမ္မာရယ်၊ ကိုသိန်းမြင့်ထွန်းရယ် ၄ ယောက်ပေါ့။ သူတို့ကပြောတာကတော့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လို့ မယက ကပြောသလိုပါပဲ။ အရပ်ထဲမှာ complaint တွေ ရှိနေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးကြီးနေတာ မကောင်းဘူး။ တီဘီတွေဘာတွေဆိုလည်း အပြန်အလှန် ကူးစက်တတ်တယ်ပေါ့။ သူတို့ဆီမှာလည်း ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတာ တခုရှိတယ်။ အဲဒီကို ပို့စေချင် တယ်ပေါ့။”
ဘယ်နေရာကို ပို့စေချင်တာလဲ သူတို့က။ -
“သာကေတ က (၇) ရပ်ကွက်ပေါ့နော်။ သာကေတ အ၀ိုင်းနားလေးမှာရှိတဲ့ ကျနော်တို့ထားတဲ့ဟာ တခု၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဘက်ကသာတာက ဆရာဝန်တွေဘာတွေ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဆရာဝန်တွေဘာတွေ ရှိတယ်၊ လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု ချက်ချင်း ပေးနိုင်တယ်၊ နောက်ပြီး အရေးပေါ်လိုအပ်တယ်ဆိုလဲ ဝေဘာဂီတို့ မင်္ဂလာဒုံတို့ကို တင်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ။”
အဲဒီတော့ ကိုရာဇာတို့ ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ လူနာတွေကို သူတို့ဆီကိုပဲ လွှဲမလား။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ -
“ဒီနေ့ တပါတည်း ပြန်ပြောလိုက်တာရှိပါတယ်။ အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ သဘောဆန္ဒနဲ့ လူနာတွေကို အတင်းအကျပ် ပြောင်းရွှေ့လို့မရဘူး။ ကျနော်တို့ လူနာတွေရဲ့ သဘောဆန္ဒကိုလည်း မေးရဦးမယ်။ ကျနော်တို့လည်း နားလည်ပါတယ်လို့ ထိုက်သင့်သလောက်။ ကျနော်တို့လဲ လုပ်လာတာ ၈ နှစ် ကျော်နေပြီဆိုတော့။ ဒီလို ရောဂါကူးစက်မှုတွေ၊ အပြန်အလှန်ကူးစက်မှု ရောဂါကိစ္စတွေ ကျနော်တို့လည်း နားလည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လဲ အတတ်နိုင်ဆုံး အဆောက်အဦးတွေ တိုးချဲ့ဖို့လည်း ကြိုးစားနေတယ်။ အဲဒါတွေလုပ်ပြီးရင် ကျနော်တို့ သီးသီးခြားခြားလေး ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ့မယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော် လာကြည့်မယ်။ ကျနော် တရက်လာကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားဦးမယ်။ ကျနော်တို့ ဒီလိုပဲ ပြောထားတယ်။”
ဟုတ်ကဲ့။ လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတာက အဲဒီ တည်းခိုဆောင်ကို ကိုရာဇာတို့က သွားကြည့်မယ်ပေါ့။ -
“ဒီလိုဗျာ။ ဒါက တတိယအကြိမ်တွေ့တာ။ ဒီဆရာဝန်အုပ်စုနဲ့ ကျနော်နဲ့က။ တွေ့ပြီးတော့ အဲဒီလိုပဲ သူတို့ဆီကို ပို့လို့ရပါတယ်။ ကုလို့ရပါတယ်။ နှစ်တိုင်းပဲလာပြောတယ်။ ပြောတော့ ကျနော် သွားပို့တယ်။ တယောက် သွားပို့သေးတယ်။ သွားပို့တဲ့ဟာကို အဲဒီတုန်းက အစောင့်တယောက်က ကျနော်တို့ကို မောင်းထုတ်တယ်ဗျ ကျနော်တို့ကို။ အဲဒါ အဲဒီအခြေအနေကိုလည်း ကျနော်တို့ ပြောပြလိုက်တယ်လေ။ ပြောပြလိုက်တော့ သူတို့က မဟုတ်ပါဘူး၊ မပြုပါဘူး ဆိုပြီးတော့ ပြောတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တခါတရံကျတော့ သူတို့က အောက်မှာ တကယ် ဖြစ်နေတာတွေကို သိချင်မှသိတာဗျ။ အဲဒီလိုမျိုးကလည်း ရှိတယ်။”
လူနာတွေရဲ့ သဘောထားကရော ဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ။ -
“လူနာတွေ အကုန်လုံးကို ကျနော် မေးကြည့်တယ်။ သူတို့က ကျနော်တို့နဲ့ ကင်းလွတ်ပြီးတော့ မနေချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့နဲ့ပဲ နေမယ်ပြောတယ်။ ဖမ်းချင်လည်း ဖမ်းပါစေတဲ့။ မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့။ ဒီမှာနေရာတာ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေ။”
ဟိုနေရာမှာကျတော့ ဆရာဝန်လည်း ရှိမယ်၊ ဆေးဝါးလည်း နိုင်တဲ့သဘော ပိုမရှိနိုင်ဘူးလားခင်ဗျ။ -
“အဲဒါက ပြောလို့ရှိရင် ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စက အခြား အခြားသော facilities ဆိုတာထက် မေတ္တာတရား ငတ်မွတ်မှုရဲ့ ပြဿနာပဲဗျ။ အဲဒါပဲ။ လူတွေကို တကယ်တမ်း မေတ္တာတရားပေးနိုင်တာက မဖြူလို့ပဲ သူတို့ယုံတယ်။ မဖြူဖြူသင်း လို့ပဲ သူတို့သိထားတယ်။ သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေက လူတွေ အများကြီး တွေ့ရတာကိုး။ မဖြူ တယောက်တည်းနဲ့ တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ ဆေးရုံသွားတွေ့ရတယ်။ ဆေးခန်းတွေ သွားရတယ်။ counseling တွေဝင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရင်ထဲမှာ မှတ်မှတ်သားသား ရှိနေတာက မဖြူဖြူသင်းပဲဗျ။ အဲဒါကြောင့်မို့ သူတို့က ဒီမှာနေရတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ သတ်မှတ်တာပေါ့။”
ဒီကနေ့ ကိုရာဇာ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနကလူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာရော တခြား အာဏာပိုင်တွေဘက်က ကမ်းလှမ်းတာကို မလုပ်ရင် တခုခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့သဘောမျိုးရော ဆောင်လား။ -
“အဲဒီလိုတော့ မပြောဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းဦးစီးကလူ ပြောတဲ့အထဲမှာတော့ အရပ်က complaint ဆိုတဲ့ကိစ္စကဗျာ အရပ်ထဲနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ အဆင်မပြေအောင် သူတို့ လုပ်ချင်ရင် လုပ်လာနိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ယဉ်ကျေးပါတယ်။ ဒီနေ ဆရာဝန်ကြီးတွေ၊ ဆရာမကြီးတွေက။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒီလို ခေါ်ပြောတဲ့အတွက်လည်း ကျနော် ကျေနပ်ပါတယ်။”
တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရာဇာကို ကိုသားညွှန့်ဦး ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။ NLD ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အဲဒီ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာ HIV လူနာသည် ၈၀ ကျော်ရှိနေတာပါ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တုန်းက အဲဒီဂေဟာကို သွားရောက်ပြီး လူနာတွေကို တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာပဲ ဒီလူနာတွေကို တခြားနေရာတွေကို ပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဆိုပြီး ဖိအားပေးမှုတွေ လုပ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝိုင်း | သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့် တသီးပုဂ္ဂလ အမတ်များအကြား ကွန်ယက်တခု ထူထောင်ရန် HIV/ AIDS ပိုးရှိသူများ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် စတင်မည်ဟု ယနေ့သဘောတူခဲ့ကြသည်။
တောင်ဒဂုံမြို့သစ် ကမ္ဘောဇ ၂ လမ်းတွင် NLD ကုသစောင့်ရှောက်မှု ခံယူနေသော HIV/ AIDS ပိုးရှိသူများအား ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များက ဧည့်စာရင်းတိုင် နေထိုင်ခွင့် မကြာမီပိတ်ပင်တော့မည့်အပေါ် တုန့်ပြန် လှုပ်ရှား သွားကြမည်ဟု ကမာရွတ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တသီးပုဂ္ဂလအရွေးခံခဲ့သူ ဒေါက်တာဖုန်းဝင်းက ဆိုသည်။
NLD ဗဟိုရုံးချုပ်၌ တသီးပုဂ္ဂလ ၁၂ ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်၊ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း တို့ ယနေ့မနက် ၂ နာရီခန့်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာမှ သဘောတူညီကြကြောင်း သူက ပြောသည်။
“ဒေါ်စုပြောတာက လက်တွေ့အလုပ်တခု လုပ်ပြီးတော့ ကွန်ယက်တခုကို ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ ဆိုတာပေါ့။ ဖြူဖြူသင်းတို့ လူနာတွေကို တောင်ဒဂုံကနေ အတင်းနှင်ထုတ်တဲ့ကိစ္စကို ၀ိုင်းကူးပေးချင်တာပေါ့ဗျာ ။ ကျနော်တို့က ဝိုင်းပြီး ကူပေးကြမှာပေါ့ဗျာ” ဟု ဒေါက်တာဖုန်းဝင်း က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
NLD ဗဟိုဦးစီးကော်မတီဝင် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း ဦးဆောင် ကုသစောင့်ရှောက်ပေးနေသော တောင်ဒဂုံ HIV/AIDS ကယ်ဆယ်ရေးစင်တာ၌ ဝေဒနာသည် ၆၆ ဦး ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဒေါက်တာဖုန်းဝင်း၊ ဒေါ်ယူဇာမော်ထွန်း၊ ဦးတင်ဆန်း၊ ဦးစန်းမြင့်၊ ဦးသိန်းတင်၊ ဦးမိုးထွန်း၊ ရှေ့နေ ဦးလှမျိုးမြင့်၊ ဦးရန်ကျော်၊ ဦးဝင်းချို၊ ဦးလှရှိန်၊ ဦးဝင်းကိုကိုဝင်း၊ ဦးသန့်ဇော်ဦးတို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံကြသည်။
ဒေါက်တာဖုန်းဝင်း၊ ဒေါ်ယူဇာမော်ထွန်း၊ ဦးတင်ဆန်း၊ ဦးစန်းမြင့်၊ ဦးမိုးထွန်း၊ ဦးသိန်းတန်တို့ ပါဝင်သည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ "Independent Democratic Group" က HIV/AIDS အလှူရှင်နိုင်ငံများမှတဆင့် လူနာများလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ကုသခံပိုင်ခွင့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများကို ဖိအားပေးပြောဆိုရန် တာဝန်ယူလိုက်သည်။
သူတို့ ၆ ဦးအဖွဲ့က HIV, AIDS ဝေဒနာရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့နှစ်သက်သည့်နေရာတွင် ဆက်လက် တည်းခိုနေထိုင်ခွင့် ရရှိရေးသည် အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့တွင် လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သည် အခြေခံကျပြီး အရေးကြီးသော အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အခြား တသီးပုဂ္ဂလတဦးမှာ ပုဇွန်တောင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အရွေးခံသော်လည်း မရလိုက်သူ ဦးရန်ကျော် ဖြစ်သည်။ သူတို့ကွန်ယက်၌ ဦးဝင်းချို၊ ဦးဝင်းကိုကိုဝင်း၊ ဦးသန့်ဇော်ဦး တို့ ပါဝင်သည်။
“ဖြူဖြူသင်းမှာ ဝေဒနာသည်တွေက နယ်ကလာကြတာလေ။ ဧည့်စာရင်းကိစ္စနည်းနည်း အခက်ခဲ ဖြစ်တယ်ဗျ။ အဲဒီဟာကို ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ပေးဖို့၊ ဆေးတွေဘာတွေရှာပေးဖို့။ ဆရာမ (ဒေါ်စု) က ပေါင်းလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ ဆန္ဒရှိတာကို ပြောပြပါတယ်။ အားလုံး ဥပဒေကိုလေးလေးစားစားနဲ့ ဥပဒေဘောင်အပြင်ကို မကျွံထွက်စေဖို့ အလေးအနက်ထား ပြောတာတွေ့ရပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးသတင်းလွှာ-နသ လုပ်ခွင့်ရှိသေးသူများက ပြည်သူကြား၌ စာရွက်စာတမ်း ဖြန့်ဝေ ပေးစေလိုကြသော်လည်း အရွေးမခံရသည့်နောက် သာမန်ပြည်သူဖြစ်သွားသဖြင့် နသ လုပ်ခွင့်မှာ အကျုံးဝင်မဝင် မသေချာသေးကြောင်း ဦးရန်ကျော်က ဆက်ပြောသည်။
HIV/AIDS ကယ်ဆယ်ရေးစင်တာကို NLD လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကူညီမှုဖြင့် ဗဟိုဦးစီး ကော်မတီဝင် မဖြူဖြူသင်းနှင့် လူငယ်များ ဦးစီးပြီး ၂ဝဝ၂ မှစ၍ ထူထောင်ခဲ့သည်။
နရီလင်းလက် Friday, 19 November 2010 19:32
0 comments at 4:25 PM Labels: General news
By ကိုမိုးဇော် သောကြာ, 19 နိုဝင်ဘာ 2010
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ် အဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေ ဦးစီး ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဒဂုံမြို့နယ်က လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာ HIV/AIDS ရောဂါနဲ့ ဆေးကုသနေသူတွေကို ဒီလ ၂၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ထွက်ခွာဖို့အတွက် အာဏာပိုင်တွေက မနေ့ ညနေပိုင်းက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ အဲဒီဂေဟာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် အားပေးစကားပြောကြားပြီး နောက်တရက်မှာ သတိပေးလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ HIV/ AIDS အတွက် ဆေးကုသခံနေရသူတွေဟာ နယ်တွေကို ပြန်ရမယ်ဆိုရင် ဆေးကုသမှုကောင်းစွာ မရနိုင်တာကြောင့် အသက်အန္တရာယ်အတွက် စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။
0 comments at 4:23 PM Labels: General news
0 comments at 5:16 PM Labels: General news
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာသည်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်အားပေး
နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၀
မကြာမီ ရက်ပိုင်းလေးက နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီနေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီမှာ တောင်ဒဂုံ ၁၈ ရပ်ကွက်ရှိ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာသည်များအား စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ နေရာဆီလာရောက်ပြီး လူနာများကို အားပေးစကားပြောရင်း ဒေါ်စုကို တွေ့မြင်နှုတ်ဆက်လိုတဲ့အတွက် စုဝေးလာရောက်တဲ့ လူထုကိုပါ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ စကားပြောခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ လူနာများကို အန်အယ်လ်ဒီ လူမှု အထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှ မဖြူဖြူသင်းက နှစ်အတန်ကြာကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိ လူနာ၈၀ ၀န်းကျင်ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက် ပေးထားတယ်လို့လည်း မဖြူဖြူသင်းကပြောပါတယ်။
နကိုအစီအစဉ်အရ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာသည်များကို အားပေးစကား ပြောဖို့သာဖြစ်ပေမယ့် ဒေါ်စုကိုတွေ့မြင် နှုတ်ဆက်ချင်လို့ စုဝေးရောက်လာတဲ့ ပရိသတ်ကို ဒေါ်စုက မိနစ်အနည်းငယ်မျှ စကားပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောရာမှာတော့ ကိုယ့်လောက် အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကို ပေးချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့၊ သနားလည်း သနားကရုဏာလည်း ထားတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပေးကြည့်ကြဖို့၊ ကိုယ့်လောက် အဆင်မပြေသူတွေကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကူညီချင်တဲ့ စိတ်တွေမွေးပြီး နေစေချင်တယ် ဆိုတာ၊ ပရဟိတ စိတ်ဆိုတာဟာ မွေးယူရင် ရတယ်ဆိုတာ၊ ဒီနေရာမှာရောက်နေတဲ့ လူနာတွေအတွက် ဆေးရနိုင်သမျှ ရအောင် ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတာ၊ လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ်လက်လှမ်းမှီရာကို လုပ်ပေးကြဖို့ တွေကိုပြောသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ လူ့အခြေခံတန်ဖိုးရှိပြီး လူ့သိက္ခာဆိုတာလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ၊ အဲဒီအချက်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အင်အားနဲ့ မြှင့်တင်လို့ ရတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြောစကားထဲမှာ ဒီနေရာကို သူဘာကြောင့်လာရသလဲဆိုရင် ဒီနေရာကလူတွေက အကူအညီအလိုအပ်ဆုံး လူတွေဖြစ်လို့ သူတို့ကိုအရင်ဆုံးကူညီကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတာလို့လည်း ပြောသွားပါတယ်။
မဖြူဖြူသင်းဟာ အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ်တဦးဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတန်ကြာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအရ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီဝေဒနာသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ လူမှု အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ စေတနာ၊ မေတ္တာ ပြည့်ဝခြင်း၊ အာဏာပိုင်များရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကိုလည်း အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် ဝေဒနာသည်များက အလွန်ချစ်ခင်လေးစားခြင်း ခံရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ဒဂုံမှ အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတဦးက
“ဒေါ်စုကို ချစ်လို့လာကြည့်တာပါ။ အန်တီကို အရမ်းချစ်တယ်၊ ချစ်လွန်းလို့ တီဗီမှာတောင် သွင်းထားတယ်။ စင်္ကာပူက လုပ်တဲ့ သီးလေးသီး အငြိမ့်ခွေကရတဲ့ပုံကို အောက်စက်နဲ့ ကူးပြီး တီဗီဖွင့်ဖွင့်ချင်း မှန်သားပြင်မှာ ထည့်ထားတာ၊ တီဗီဖွင့်တာနဲ့ မြင်ရအောင်”
သူက ဈေးရောင်းတဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး ဒီနေ့တော့ ဒေါ်စုလာမှာမို့လို့ ဈေးရောင်းနားတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောပြပါတယ်။ သူတို့ရပ်ကွက်ထဲက ဒေါ်စုလာမှာကို သိလို့အတော်များများ လာကြည့်ကြတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်စုလာရောက်သည့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာတ၀ိုက် အရပ်ဝတ်၊ ရဲများ၊ အက်စ်ဘီ၊ စွမ်းအားရှင်များလည်း ရောက်နေကြပြီး ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပသတင်းထောက်တွေ အများအပြားလာရောက်ကြတာ ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ အချို့ ပြည်ပသတင်းဌါနအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားသတင်းထောက်တွေဆိုရင် ဒေါ်စုခြံရှေ့နားမှာ နံနက်ကတည်းက စောင့်နေကြပြီး ဒေါ်စုသွားမယ့်နေရာကို လိုက်ကြတဲ့ အနေအထားမျိုးလည်း ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေကို တဦးချင်း ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်တဲ့ အရပ်ဝတ် ရဲ၊ အက်စ်ဘီတွေလည်း အများအပြားတွေ့ရပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရပ်ကွက်မှာနေသူပုံစံမျိုး ပုံဖျက်ထားပေမယ့် ပွဲပြီးတဲ့အခါ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနကကားပေါ် ပြေးတက် လိုက်ပါသွားတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်လို့ သတင်းထောက်တွေကပြောပါတယ်။
ယခင်က အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း၊ နိုင်ငံရေး သတင်းတွေကို ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေ အနေနဲ့ လိုက်ယူလေ့မရှိပေမယ့် ယခုအခါမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း၊ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို နေ့စဉ်လိုလိုလိုက်ယူပြီး ရေးသားတင်ပြဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ စာပေ စိစစ်ရေးကလွတ်ပါ့မလားဆိုတာကို မစဉ်းစားထားပဲ ရေးလို့ရသလောက်ရေးသားတင်ပြဖို့ ကြိုးစားနေကြတာတွေ့ရတယ်လို့ သတင်းအယ်ဒီတာတယောက်က ပြောပါတယ်။
တောင်ဒဂုံ ပြည်သူလူထုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားပြောပြီးနောက် စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာအတွင်း ၀င်ပြီးလူနာများကို အားပေးစကားပြောကာ မွန်းလွဲ ၃ နာရီဝန်းကျင်မှာ ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံများ - နို၁၆၊၂၀၁၀။ ရန်ကုန်၊ တောင်ဒဂုန်၊ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီလူနာရိပ်သာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ဖြူဖြူသင်း။ မြန်မာပြည်သူများ။ (မိုးမခ))
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့နိုင်ဖို့ NLD ပါတီဝင်တွေ ရန်ကုန်ရောက်လာ
0 comments at 5:08 PM Labels: General news
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာရင် တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ဝင်တွေ ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ကိုရောက်လာနေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း တို့ က အဖွဲ့ ဝင်တွေ ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်နေကြပြီး စုစုပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးလောက်ရှိတယ်လို့NLD ဗဟို ကော်မတီဝင် မဖြူဖြူသင်းက ပြောပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဌာနချုပ်ရုံးတွင် ကျင်းပသည့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတွင် ပါတီ၏ သင်္ကေတတခု ဖြစ်သော ခမောက်ကိုယ်စီ ဆောင်းထားသည့် အဖွဲ့ဝင်များကို ၂၀ဝ၈ မေလ ၂၇ ရက်က တွေ့ရပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ပြီး ကတည်းက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်လွတ်မြောက်တော့မယ့်အချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ထဲ ၀င်ရောက်မှုကြောင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချိုးဖောက်မှု စွဲချက်နဲ့ အာဏာပိုင်တွေက ထောင်ဒဏ် (၃)နှစ် ထပ်စီရင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို လျှော့ပေး တယ်ဆိုတဲ့အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအမိန့်မှာ မည်သို့ ပင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားသည်ဖြစ်စေ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေအရ တရားရုံးကချမှတ်ထားသော ပြစ်ဒဏ်များအနက် ပြစ်ဒဏ်ရဲ့ထက်ဝက်ကိုသာကျခံစေရန်၊ လျှော့ပေါ့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၊ ကျန်ပြစ်ဒဏ်ကိုလဲဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ မှာ သူ့ ကို ချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ရဲ့ ထက်ဝက်တင်းတင်းပြည့်ပြီဖြစ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ အမိန့် အတိုင်း လွှတ်ကိုလွှတ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့NLD အဖွဲ့ ဝင်တွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ရက်ကို ကြိဆိုတဲ့အနေနဲ့ အဖွဲ့ ဝင်တွေက မနက်ဖြန်မှာ ဆေးရုံတွေသွားပြီး သွေးလှူကြမယ်လို့ လဲ သိရပါတယ်။
0 comments at 8:42 PM Labels: General news
မနက်ဖြန် ပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ဘားအံထောင်မှာ စစ်အစိုးရက ထောင်ချထားတဲ့ ကိုကျော်ကျော်နိုင် ဒီနေ့မနက် ၈ နာရီကစပြီး ထောင်တွင်း အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှု စတင်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်ခေါင်းဆောင် မဖြူဖြူသင်းက “အခုသတင်းကို ကိုကျော်ကျော်နိုင် ကိုယ်တိုင် သူ့ လက်ရေးနဲ့ ထုတ်ပေးလိုက်တာ။ ဒီကိစ္စကို ထုတ်မပြောဘူးဆိုရင် သူ ဘာသတင်းမှ မကြားရဘဲနဲ့ ပျောက်သွားမှာ စိုးလို့ပါ” လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ကိုကျော်ကျော်နိုင်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ်စည်းရုံးရေးမှူးတဦး ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအပြီးမှာ ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ် အပြစ် ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။
Posted by စိုင်းဇွမ်ဆိုင်း at 10:27 PM
Labels: Election, News, သတင်း, ရွေးကောက်ပွဲ
ဖေါက်ပြန်ရေးသမား၊သစ္စာဖေါက် NDF နဲ့ DP၊ မင်းတို့ကောင်တွေအခုကိုကျော်ကျော်နိုင်တယောက်ရွေးကောက်ပွဲကိုထောင်ထဲကနေဆန္ဒပြနိုင်တယ်။ မင်းတို့ကောင်တွေတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တယ်မှန်ရင်ဒီနေ့နောက်မကျခင်ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ပြီးထွက်လာကြပါလားကွ။
ကိုကျော်ကျော်နိုင်ရေ၊ ခင်ဗျားတို့၊ကျနော်တို့အားလုံးဒီစစ်ကျွန်ဘဝကလွတ်အောင်နက်ဖြန်ခါတနိုင်ငံလုံးမဲမပေးဘူး၊မဲရုံမသွားဘူး။ ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်မှောက်ကြမယ်။